Bhuku Rechipiri reMadzimambo 18:1-37
Hezekiya, mambo weJudha (1-8)
Kudzokororwa kwenyaya yekukundwa kwevaIsraeri (9-12)
Saniheribhi anopinda muJudha nechisimba (13-18)
MuRabhisheki anoshora Jehovha (19-37)
18 Mugore rechitatu raHoshea+ mwanakomana waEraa mambo weIsraeri, Hezekiya+ mwanakomana waMambo Ahazi+ weJudha akava mambo. 2 Aiva nemakore 25 paakava mambo, uye akatonga kwemakore 29 muJerusarema. Amai vake vainzi Abhi* mwanasikana waZekariya.+ 3 Akaramba achiita zvakarurama pamberi paJehovha,+ sezvakanga zvaitwa natateguru vake Dhavhidhi.+ 4 Ndiye akabvisa nzvimbo dzakakwirira,+ akaputsa shongwe dzinoyera, akatema bango rinoyera.*+ Akapwanya-pwanyawo nyoka yemhangura yakanga yagadzirwa naMozisi;+ nekuti kusvika panguva iyoyo vaIsraeri vakanga vachiikwidzira utsi hwezvibayiro, uye vaiishevedza kuti chifananidzo chenyoka yemhangura.* 5 Akavimba naJehovha+ Mwari waIsraeri; hakuna akanga akafanana naye pamadzimambo ese eJudha akamutevera kana aya akamutangira. 6 Akaramba akanamatira kuna Jehovha.+ Haana kutsauka pakumutevera; akaramba achichengeta mirayiro yainge yapiwa Mozisi naJehovha. 7 Jehovha aiva naye. Airatidza uchenjeri kwese kwaaienda. Akapandukira mambo weAsiriya, akaramba kuva pasi pake.+ 8 Akakundawo vaFiristiya+ kusvika kuGaza nenharaunda dzayo, kubva kunharire* kusvika kuguta rakakomberedzwa nemasvingo.* 9 Mugore rechina raMambo Hezekiya, kureva gore rechi7 raHoshea+ mwanakomana waEraa mambo weIsraeri, Mambo Sharimaneseri weAsiriya akauya kuzorwisa Samariya, akatanga kuikomba.+ 10 Vakaitora+ pakupera kwemakore matatu. Mugore rechi6 raHezekiya, iro raiva gore rechi9 raHoshea mambo weIsraeri, Samariya yakatorwa. 11 Mambo weAsiriya akabva atapa vaIsraeri+ akavaendesa kuAsiriya, akavagarisa muHeira nemuHabhori kurwizi rwaGozani uye mumaguta evaMedhiya.+ 12 Izvi zvakaitika nekuti vakanga vasina kuteerera inzwi raJehovha Mwari wavo, asi vakaramba vachiputsa sungano yake, zvinhu zvese zvakanga zvarayirwa naMozisi mushumiri waJehovha.+ Havana kuzviteerera kana kuzviita. 13 Mugore rechi14 raMambo Hezekiya, Saniheribhi mambo weAsiriya+ akauya kuzorwisa maguta ese eJudha akanga akakomberedzwa nemasvingo, akaatora.+ 14 Saka Mambo Hezekiya weJudha akatumira shoko kuna mambo weAsiriya kuRakishi, achiti: “Ndini ndine mhosva. Rega kundirwisa, uye ndichakupa chero chaunenge wanditemera.” Saka mambo weAsiriya akabhadharisa Hezekiya mambo weJudha matarenda* 300 esirivha nematarenda 30 egoridhe. 15 Saka Hezekiya akamupa sirivha yese yaiva muimba yaJehovha nemaichengeterwa pfuma yeimba yamambo.*+ 16 Panguva iyoyo Mambo Hezekiya weJudha+ akabvisa masuo nemagwatidziro* etemberi+ yaJehovha aakanga aisa goridhe, akaapa mambo weAsiriya. 17 Mambo weAsiriya akabva atuma muTatani,* muRabsarisi,* nemuRabhisheki,* vaine uto guru kubva kuRakishi+ kuti vaende kuna Mambo Hezekiya kuJerusarema.+ Vakaenda kuJerusarema vakanomira pamugero wemvura unobva kudziva rekumusoro, riri pamugwagwa mukuru wekumunda wemugezi wenguo.+ 18 Pavakashevedzera kuti mambo abude, Eriyakimu+ mwanakomana waHirikiya, uyo aitungamirira imba yacho,* naShebhina+ munyori, naJoa mwanakomana waAsafi munyori wezvaiitika vakabuda vakaenda kwavaiva. 19 Saka muRabhisheki akati kwavari: “Ndapota, itii kuna Hezekiya, ‘Zvanzi namambo mukuru, mambo weAsiriya: “Uri kuvimba nei?+ 20 Uri kuti, ‘Ndine zvandakaronga uye ndine simba rekurwa,’ asi uri kuzvinyepera. Ndiani wauri kuvimba naye, zvekuti uri kushinga kundipandukira?+ 21 Inzwa! Uri kuvimba nerutsigiro rwetsanga iyi yakapwanyika, iyo Ijipiti,+ inoti kana munhu akazvitsigisa nayo inopinda muchanza chake yochibaya. Ndizvo zvakaita Farao mambo weIjipiti kune vese vanovimba naye. 22 Kana mukati kwandiri, ‘Tinovimba naJehovha Mwari wedu,’+ haasi iye here ane nzvimbo dzakakwirira neatari zvakabviswa naHezekiya,+ achiti kuJudha neJerusarema, ‘Munofanira kupfugama pamberi peatari iyi iri muJerusarema’?”’+ 23 Saka iye zvino ndapota, bhejerana nashe wangu mambo weAsiriya: Ndichakupa mabhiza 2 000 kuti ndione kana uchikwanisa kuwana vanhu vanokwana kuatasva.+ 24 Zvino ungakwanisa sei kukunda kunyange gavhuna mumwe chete, mudiki pavaranda vese vashe wangu, iwe uchivimba neIjipiti kuti uwane ngoro nevatasvi vemabhiza? 25 Ini handina here kubvumirwa naJehovha kuti ndiuye kuzorwisa nzvimbo ino ndoiparadza? Jehovha pachake ndiye akati kwandiri, ‘Enda unorwisa nyika iyi, uiparadze.’” 26 Eriyakimu mwanakomana waHirikiya, naShebhina+ naJoa vakabva vati kumuRabhisheki:+ “Tapota, taurai henyu nevaranda venyu nemutauro wechiAramaiki,*+ nekuti tinounzwa; musataura nesu nemutauro wevaJudha vanhu vari parusvingo vachinzwa.”+ 27 Asi muRabhisheki akati kwavari: “Ishe wangu andituma kuti ndizongotaura mashoko aya kunashe wenyu nekwamuri chete here? Haana kunditumawo here kuvanhu vakagara parusvingo, avo vachadya tsvina yavo nekunwa weti yavo pamwe chete nemi?” 28 MuRabhisheki akabva amira akashevedzera nenzwi guru nemutauro wevaJudha, achiti: “Inzwai shoko ramambo mukuru, iye mambo weAsiriya.+ 29 Zvanzi namambo, ‘Musarega Hezekiya achikunyengerai, nekuti haakwanisi kukununurai paruoko rwangu.+ 30 Uye musarega Hezekiya achiita kuti muvimbe naJehovha, achiti: “Chokwadi Jehovha achatinunura, uye guta rino harisi kuzoiswa muruoko rwamambo weAsiriya.”+ 31 Musateerera Hezekiya, nekuti zvanzi namambo weAsiriya: “Yananai neni muzviise mega mumaoko angu, uye mumwe nemumwe achadya michero yemuzambiringa wake neyemuonde wake uye achanwa mvura yemumugodhi wake, 32 kusvikira ndauya ndokuendesai kunyika yakaita senyika yenyu,+ nyika ine zviyo* newaini itsva, nyika ine chingwa neminda yemizambiringa, nyika ine miti yemiorivhi neuchi. Muchararama morega kufa. Musateerera Hezekiya, nekuti ari kukunyengerai achiti, ‘Jehovha achatinunura.’ 33 Pana mwari wemamwe marudzi akambonunura nyika yake paruoko rwamambo weAsiriya here? 34 Vanamwari veHamati+ neApadhi vari kupi? Vanamwari veSefavhaimu,+ Hena, neIvha vari kupi? Vakanunura Samariya paruoko rwangu here?+ 35 Pavanamwari vese venyika, ndeupi akanunura nyika yake paruoko rwangu, zvekuti Jehovha anganunura Jerusarema paruoko rwangu?”’”+ 36 Asi vanhu vakaramba vakanyarara, uye havana kana shoko ravakamupindura, nekuti murayiro wamambo waiti,“Musamupindura.”+ 37 Asi Eriyakimu mwanakomana waHirikiya, uyo aitungamirira imba,* naShebhina munyori, naJoa mwanakomana waAsafi munyori wezvaiitika, vakasvika kuna Hezekiya nguo dzavo dzakabvaruka, vakamuudza mashoko emuRabhisheki.
^ Uku kupfupikiswa kwezita rekuti Abhija.
^ Kana kuti “vaiishevedza kuti Nehushitani.”
^ Kana kuti “mutungamiriri wevakuru vemumuzinda.”
^ Kana kuti “nemukuru wevadiri.”